ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ယောကျာ်း မယူရဲတဲ့ အကြောင်း အရင်းသိရပြီ…2 – Alanzayar
ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ယောကျာ်း မယူရဲတဲ့ အကြောင်း အရင်းသိရပြီ…2
ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ယောကျာ်း မယူရဲတဲ့ အကြောင်း အရင်းသိရပြီ…
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အသားဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ကိုရီးယားမလေးလို့ ထင်မှတ်ရလောက် အောင် ချစ်စရာကောင်းသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ရဲ့ ကြော်ငြာအတွက် ရိုက်ကူးပေးရင်းနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။…
ရွှေကစ်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားပြီး သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်း ပီပြင်ကောင်းမွန် မှုတို့ကြောင့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကိုပါ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေကစ်လေးဟာ လတ်တလောမှာတော့ ကြော်ငြာများစွာ ရိုက်ကူးနေရပြီး ပွဲအခမ်းအနားပေါင်းများစွာကိုလည်း…
လက်မလည်အောင် တက်ရောက်နောတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရည်လေးက ဝင်းလက်နေတာကြောင့်လည်း ဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးနဲ့ပဲ ဝတ်ဝတ် ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Tik Tok လေးတွေကိုလည်း မအားလပ်တဲ့ကြားကနေ ရိုက်ကူးကာတင်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။….
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ရွှေကစ်ရဲ့ Tik Tok အကောင့်မှာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အနားမှာကောင်ချော လေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ခါချနေရတဲ့အကြောင်းကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြသလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။….
ရွှေကစ်ဟာ အဆိုတော် ချယ်ရီသင်းရဲ့ ”အပျိုကြီး ” သီချင်းလေးနဲ့ Tik Tok ကစားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မစဉ်းစားဘဲ အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီ tiktok ဗွီဒီယိုလေးကနေ သိနိုင်ပါတယ်နော်။ crd
ဝတျမှုနျရှရေညျ ယောကျြား မယူရဲတဲ့ အကွောငျး အရငျးသိရပွီ….
မဂျလာပါ ပရိတျသတျကွီးရေ အသားဖွူဖွူဖှေးဖှေးလေးနဲ့ ကိုရီးယားမလေးလို့ ထငျမှတျရလောကျ အောငျ ခဈြစရာကောငျးသူလေးကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုနျရှရေညျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ အလှကုနျပစ်စညျးတဈခု ရဲ့ ကွျောငွာအတှကျ ရိုကျကူးပေးရငျးနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရှကေဈဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးမှုတှကေိုရရှိထားပွီး သရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာလညျး ပီပွငျကောငျးမှနျ မှုတို့ကွောငျ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုကိုပါ ရရှိပိုငျဆိုငျထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ရှကေဈလေးဟာ လတျတလောမှာတော့ ကွျောငွာမြားစှာ ရိုကျကူးနရေပွီး ပှဲအခမျးအနားပေါငျးမြားစှာကိုလညျး
လကျမလညျအောငျ တကျရောကျနောတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အသားအရညျလေးက ဝငျးလကျနတောကွောငျ့လညျး ဘယျလိုဖကျရှငျမြိုးနဲ့ပဲ ဝတျဝတျ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမခဈြတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ Tik Tok လေးတှကေိုလညျး မအားလပျတဲ့ကွားကနေ ရိုကျကူးကာ
မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး ရှကေဈရဲ့ Tik Tok အကောငျ့မှာ ဗီဒီယိုလေးတဈခု တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ အနားမှာကောငျခြော လေးတှဝေိုငျးဝိုငျးလညျနလေို့ခါခနြရေတဲ့အကွောငျးကို ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့ပွသလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ရှကေဈဟာ အဆိုတျော ခယျြရီသငျးရဲ့ ”အပြိုကွီး ” သီခငျြးလေးနဲ့ Tik Tok ကစားထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှလေညျး ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျအောငျ ဒီဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ အိမျထောငျပွုဖို့ မစဉျးစားဘဲ အပြိုကွီးလုပျဖို့ စဉျးစားထားတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ဒီ tiktok ဗှီဒီယိုလေးကနေ သိနိုငျပါတယျနျော။ crd
Previous Article သိသူနည်းတဲ့ အပင်တွေကို ထုံးဖြူသုတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
Next Article ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ